🥇 ▷ Android: Google waxay ku dallici doontaa mashiinnada raadinta tooska ah ee loogu talagalay soo-jeedinta caadiga ah ee Yurub ✅
Android: Google waxay ku dallici doontaa mashiinnada raadinta tooska ah ee loogu talagalay soo-jeedinta caadiga ah ee Yurub
Maj. Ogosto 2, 2019 saacadu markay tahay 5:38 pm
Google ayaa ku dallici doonta matoorada raadinta ee loogu deeqi doono sida caadiga ah isticmaaleyaasha Android ee Yurub, ayaa bayaan ay soo saartay shirkadda Mountain View ku sheegtay. Ka dib go’aanka guddiga Yurub, Google runtii waa lagu qasbay inay bixiso waxyaabo kale oo loogu talagalay mashiinka raadinta. Si looga soo muuqdo taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada Android, matoorrada noocan ah waa inay kor u qaadaan xaraashka bilaha si kaalay. Faahfaahinta.
Ka dib markii lagu ganaaxay 5 bilyan oo euro oo ay soo rogtay guddiga Yurub sanadkii 2018, Google ayaa hadda ku waajib ah inay weydiiso isticmaaleyaasha Android inay doortaan mashiinkooda raadinta iyo barta internetka ay doorbidayaan markay dejinayaan taleefannadooda casriga ah. Si loo doorto mashiinnada raadinta cusub ee lagu bixin doono Android sanadka 2020, Google wuxuu go’aansaday inuu dejiyo nidaam xaraash dal kasta oo Yurub ah.
Google ayaa ku dallici doonta mashiinnada raadinta tooska ah ee Android ee Yurub
Bayaan kasta oo dalka laga sameeyo, bixiyeyaasha matoorrada baarista waxay muujinayaan qiimaha ay diyaar u yihiin inay bixiyaan markasta oo isticmaalegu u doorto inuu yahay xalka ugu habboon Android, “Google ayaa lagu yiri bayaanka. Shirkadda waxay sheegaysaa in xadka ugu hooseeya ee qandaraaska la diyaarin doono. Shirkadda xaraashku waa hab caddaalad ah oo macquul ah oo lagu go’aaminayo kuwa soo saara cilmi-baarista ay tahay in lagu daro, ayay tiri shirkadda.
Waddan kasta oo Yurub ah, saddex matoorada ayaa la dooran doonaa waxayna u muuqan doontaa dhinaca xalka xalalka hore loo soo jeediyay (Google, Yahoo, DuckDuckGo, Ecosia). Qalabka raadinta ee raba inuu ka qeybqaato xaraashka waa inuu ogeysiiyaa Google ka hor Sebtember 13, 2019. Shirkadda ayaa shaaca ka qaadi doonta liiska liiska iibsadayaasha ugu wanaagsan Oktoobar 31-keeda.
Sidoo kale aqri: Android – sideyna mar dambe Google ula socon doonin?
“Waxaan soo bandhigi doonnaa dariiqo cusub oo adeegsadayaasha Android ay ku dooran karaan bixiye baadi goob” Google wuxuu ballanqaaday Google, muuqaal lagu taageerayo. Mashiinnada raadinta cusub ee la soo xulay ayaa ka soo muuqan doona bilowga 2020 taleefannada casriga ah ee Android ee Yurub.